कस्तो अच्चमः यी १८ वर्षका युवक भए प्रेग्नेन्ट, कोखमा ४ महिनाको बच्चा ! – Interview Nepal
कस्तो अच्चमः यी १८ वर्षका युवक भए प्रेग्नेन्ट, कोखमा ४ महिनाको बच्चा !
काठमाडौं , पुस १२६ । के तपाईले कहिल्यै पुरुष गर्भवती बनेको खबर सुन्नु भएको छ ? बेलायतमा एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । आमा सबैले बन्न सक्दैनन् र आमा बन्नु महिलाको लागि विशेष क्षण हो । किनभने उनीहरुको भित्र आफ्नै अंश बढीरहेको हुन्छ ।
बेलायतका १८ वर्षीय एक पुरुष प्रेग्नेन्ट भएका छन् । उनको कोखमा ४ महिनाको बच्चा बढीरहेको छ । उनको नाम मिके चनेल रहेको छ भने उनी बेलायतको बोस्टन शहरमा बस्छन् ।
उनको शरीरमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रहेको छ । जसका कारण उनले गर्भाएधारण गरेका छन् । उनको जन्म पुरुषको रुपमा भएपनि उनको सबै व्यवहार महिलाको जस्तो थियो । तपाईलाई यो सुन्दा र पढ्दा अच्चम लाग्यो होला है ।
Posted in अचम्मका कुरा